ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း Fifty years after the crisis, Graham Allison wrote:
ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း Critics including Seymour Melman and Seymour Hersh suggested that the Cuban missile crisis encouraged US use of military means, such as in the Vietnam War. This Soviet-American confrontation was synchronous with the Sino-Indian War, dating from the US's military blockade of Cuba; historians speculate that the Chinese attack against India for disputed land was meant to coincide with the Cuban missile crisis.
ဂျော့ချ် ဆိုးရော့စ် ကျွန်တော့်မှာ crying wolf ရဲ့မှတ်တမ်းရှိတယ်။ အဲ့ဒါကို ၁၉၈၇ တုန်းက The Alchemy of Finance မှာ ထည့်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ၁၉၉၈ တုန်းက The Crisis of Global Capitalism နဲ့ ခု ဒီစာအုပ်ထဲမှာ။ အဲ့သည့် ၃ အုပ်စလုံးက ဘေးအန်တရာယ်ဆိုးတွေကို ကြိုခန့်မှန်းထားတာပါ။ ကောင်လေးက သုံးခါလောက် ဝံပုလွေကိုတမ်းတပြီးငိုတော့ ဝံပုလွေကတကယ်ရောက်လာတယ်။ သူ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုများ မှားယွင်းသွားသောအခါ သူ၏ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ဖို့ စွဲမြဲထင်မှတ်ခဲ့တယ်။
အာရှကွန်ယက်အဓိကမြို့ကြီး ၂၁ အာရှကွန်ယက်အဓိကမြို့ကြီး ၂၁ဆိုသည်မှာ များလှစွာသော အာရှ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်မြို့တော်များကို ကိုယ်စားပြုပြီး ၎င်းအစီအစဉ်တွင် ယေဘုယျပြယုဂ်အဖြစ် မြို့ပြတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ Crisis management ကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များပါဝင်သည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းကို တိုကျိုမြို့တော်ဝန် Shintaro Ishihara (၁၉၉၉-၂၀၁၂) မှထောက်ခံခဲ့ပြီး ဩဂုတ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ကွာလာလမ်ပူမြို့၌ ကျင်းပသော အစည်းအဝေးပွဲတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြေငြာချက်နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း Although General Curtis LeMay told the President that he considered the resolution of the Cuban missile crisis the "greatest defeat in our history", his wasaminority position. He had pressed for an immediate invasion of Cuba as soon as the crisis began, and still favored invading Cuba even after the Soviets had withdrawn their missiles. 25 years later, LeMay still believed that "We could have gotten not only the missiles out of Cuba, we could have gotten the Communists out of Cuba at that time".
ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း In addition, Khrushchev's impression of Kennedy's weakness was confirmed by the President's soft response during the Berlin Crisis of 1961, particularly the building of the Berlin Wall. Speaking to Soviet officials in the aftermath of the crisis, Khrushchev asserted, "I know for certain that Kennedy doesn't haveastrong background, nor, generally speaking, does he have the courage to stand up toaserious challenge." He also told his son Sergei that on Cuba, Kennedy "would makeafuss, make more ofafuss, and then agree".
ကျူးဘားဒုံးပျံအရေးအခင်း After the crisis the United States and the Soviet Union created the Moscow–Washington hotline,adirect communications link between Moscow and Washington, D.C. The purpose was to haveaway that the leaders of the two Cold War countries could communicate directly to solve suchacrisis. The world-wide US Forces DEFCON3status was returned to DEFCON4on November 20, 1962. U-2 pilot Major Anderson's body was returned to the United States and he was buried with full military honors in South Carolina. He was the first recipient of the newly created Air Force Cross, which was awarded posthumously.
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ချက်နိုင်ငံသည် စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို လျှင်မြန်စွာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေး (privatization) ကို လျှင်မြန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇-၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့စီးပွားပျက်ကပ် (global economic crisis) မကျရောက်မီအထိ နှစ်စဉ်စီးပွားရေးမှာ ဂျီဒီပီ ၆% ခန့် ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အစီရင်ခံစာအရ ဖွံ့ဖြိုးဆဲတိုင်းပြည် အဖြစ်မှ ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ရှေ့ဆုံးမှ တာစူနေသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများထဲတွင် လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်း အနေဖြင့် အလွန်မြင့်မားသောနိုင်ငံများ (Very High Human Development) စာရင်းထဲသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။